''အသက်ကြီးသွားရင်လည်း အသက်ကြီးတဲ့ကားတွေ အများကြီး ရိုက်လို့ရတယ်၊ ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ လူငယ်ကား?? - Yangon Media Group
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ရင် Drama ဆန်ဆန်တည်ငြိမ်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေ မကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် လွှမ်းပိုင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း……။
မေး- ”ကိုယ်စောင့်နတ်” ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ရော Producer အဖြစ် ပါ ပါဝင်ဖြစ်ပုံလေး ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ- ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ Producer အနေနဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကတော့ ပိုက်ဆံရှိလွန်းလို့ လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ရိုက်ချင် တာကို ရိုက်ပေးမယ့်သူမရှိတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲရိုက်လိုက်တာပါ။ ဒီကား လေးမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်း သာတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် လုပ်ချင်တာတွေ အများကြီးလုပ်ခွင့်ရ တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရယ်၊ ကိုထက် ရယ်၊ ကိုရွှေမန်းရယ် သုံးယောက်ပေါင်း ပြီးတော့ လုပ်ကြတာပါ။ သုံးယောက်စလုံး ကလည်း စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ဆိုတော့ ဒီ ကားလေးက ပိုပြီးတော့ကောင်းသွားတယ် လို့ထင်ပါတယ်။
မေး- ဒီလို ဇာတ်လမ်းပုံစံမျိုးလေး ရိုက်ဖြစ် ခဲ့ပုံကိုပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ဘယ်လိုဖန်တီးဖြစ်လဲဆိုတော့ ဟိုး အရင်တုန်းကဆို ဒီလိုမျိုး Teen-Age Movie တွေက Hollywood မှာအရမ်းများတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ Teen-Age movie တွေကို Hollywood မှာ သိပ်မရိုက်ကြတော့ဘူး။ တီဗွီစီးရီးဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီလိုမျိုး Movie တွေကို အရမ်းကြိုက်တာ။ ကြည့်လို့လည်း အရမ်းကောင်းတယ် ဆို တော့ အဲဒီလိုမျိုး Teen-Age movie စစ်စစ်ကလည်း မြန်မာပြည်မှာ မရှိသေး ဘူးဆိုတော့ ဒါမျိုးလေးရိုက်ရင်မိုက်မယ်လို့ထင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က စပြီးတော့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင် အရည်အသွေး လည်းကောင်းရမယ်။ စိတ်ကူးထဲကအတိုင်းလည်း အကုန်လုံးဖြစ်အောင် ရိုက်ကြမယ်လို့ စိတ်ကူးမိပြီး အခုလိုရိုက်ဖြစ်တာပါ။
မေး- ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ရော ကိုယ့်သရုပ်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ- ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ များ သောအားဖြင့် ကျွန်တော်အရင်တုန်းက ကားတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင် သိပ် ပြီးတော့ အားမရဘူးပေါ့နော်။ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဇာတ်လမ်းကိုပဲဖြစ် ဖြစ် ရိုက်ထားတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို အားမရတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ကားကို ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ အ ရမ်းကိုအားရပါတယ်။ ဒီကားက ကျွန် တော် ရိုက်ခဲ့သမျှ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ စိတ်ကျေနပ်ဆုံးကားပါ။ ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အားလုံးကို ကျွန်တော်ကျေနပ် ပါတယ်။
မေး- လတ်တလောမှာရော အခြားအနု ပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲ။
ဖြေ- အခြားလှုပ်ရှားမှုတွေက ဒီ”ကိုယ် စောင့်နတ်”ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးကို Music MTV နဲ့ဒီအပတ်ထဲမှာ ထွက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ နောက်နှစ် ၂ဝ၁၉ထဲမှာသီချင်း အသစ်တစ်ပုဒ်ထပ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ သီချင်းကိုလည်း အွန်လိုင်းမှာ တင်ပေး သွားမှာပါ။
မေး- အခွေလုပ်ဖို့ရော အစီအစဉ်ရှိလား။
ဖြေ- အခွေက ဒီ ၂ဝ၁၉ ထဲမှာ အခွေ အသစ်ထပ်ထုတ်ဖို့လည်း အစီအစဉ်ရှိ ပါတယ်။ Live Show လည်း လုပ်ချင်ပါတယ်။
မေး- ကိုယ်တိုင်ကရော ဇာတ်ကားရိုက် ရင် လူငယ်ဇာတ်တွေ ပို ကြိုက်တာလား။ အခြားကာရိုက်တာတွေရော ရိုက်ချင်တာ မရှိဘူးလား။
ဖြေ- လူငယ်ကားဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ အခုလို ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ အများကြီးရိုက် လို့ရတယ်။ အသက်ကြီးသွားရင်လည်း အသက်ကြီးတဲ့ကားတွေက အများကြီး ရိုက်လို့ ရတယ်။ အဲဒါကြောင့်အခုလိုငယ် ရွယ်တုန်းမှာ လူငယ်ကားလေးတွေ အများ ကြီးရိုက်ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဇာတ်ကားအတွက် Character လာကမ်းလှမ်း ရင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကြီးတွေ Drama ဆန်ဆန်ကြီးတွေလာရင် မကြိုက်ဘူး။လူ ငယ်ကားတွေပဲအများကြီး ရိုက်ချင်ပါတယ်။
မေး- ၂ဝ၁၉ မှာရော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ဖို့ ရှိလား။
ဖြေ- ဒီ၂ဝ၁၉ထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ရမယ့် ကားတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်တော့လောက် လဲတော့ ကျွန်တော်လည်း သေချာမသိပါဘူး။ Producer ပြောမှပဲ ကျွန်တော် လည်း ပြောပြလို့ရမှာပါ။ New Year အစီအစဉ်ကတော့ ဘာမှမရှိသေးပါဘူး။
အိမ်ထောင်နှစ်ဆက် ရှိခဲ့သော်လည်း 'အချစ်' ကို ယုံကြည်နေဆဲဟု ပြောဆိုခဲ့သော အဆိုတော် Avril Lavigne
‘အကယ်ဒမီဆုကို နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်တာပဲ ပိုကြိုက်ပါတယ်။ အခုဟာက ရှေ့နေငှားမှ ထောင်လုံးလံ??
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးတွင် ကပ်လှူထားသည့် ရွှေပြားများတွင် ရွှေစင်ပါဝင်မှု နည်းပါးသည်ဟူသေ?